दिपकले किन छोडे त दीपालाई ? बुझ्नको लागि पढ्नुहोस के रहेछ ?
January 2, 2019 Debraj Kandel फिल्मी 1
काठमान्डौ , नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा मह जोडी जस्तै मानिएको जोडी हो दिपक राज गिरी र दीपा श्री निरौला । हाँस्य प्रहशन हुँदै रामबिलास धनियाँ र तितो सत्यसम्म आईपुग्दा यो जोडीलाई दर्शकहरुले निकै रुचाए ।
उनीहरुको सह कार्य फिल्म निर्माणसम्म पुगेको छ । छ एकान छ हुँदै छक्का पञ्जा ३ सम्म यो जोडी सफल भए । त्यसपछि दीपाले छक्का पञ्जा निर्देशन गर्दे यो टिमलाई अगाडी बढाए ।
ह्याट्रिक फिल्म दिने र सर्वाधिक कलेक्सन गर्ने फिल्मको निर्देशक रहेकी दीपालाई दिपकले आफनो प्रोजेक्टमा भने लिएका छैनन् । दिपकले गाजलु निर्माता रोहित अधिकारीसंग मिलेर निर्माण गर्न लागेको फिल्ममा उनले दीपालाई निर्देशकको रुपमा लिएका छैनन् ।
सम्भवत साझेदारीको काम भएकोले पनि यो सम्भव नभएको हुन सक्छ । फिल्मको कलाकार र प्राविधिकहरु छनौट भईसकेका छैनन् । अब हेरौ निर्देशकमा नभएपनि दीपा कलाकारको रुपमा दिपकको प्रोजेक्टमा आवद्ध हुन्छिन् वा हुँदिनन्।
फिल्मलाई दीपेन्द्र लामाले निर्देशन गर्ने भएका छन् । फिल्म अर्काे बर्ष रिलिज गर्ने दिपकले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस :- एशियाकै सबैभन्दा सुन्दरी महिलाको दोस्रो स्थानमा परेकी यी नायिका ! हेर्नुहोस् ५ तस्विर
सिकिस्त बिरामी हुदा उपचारको साटो घर भित्रै मर्‍यो भने अशुभ हुन्छ भन्दै घरबेटीले ज्युँदै आर्यघाट पुर्‍याइदिए
लेखा समितिका सांसद भन्छन्, ‘रवीन्द्र अधिकारी धेरै बोलेर फस्नुभयो’ – News Mala